Farsamada isku-darka dijitaalka (aasaaska Photoshop) | Abuurista khadka tooska ah
Mashiinka loo yaqaan 'Cutpaste' (farsamada kolajka)
Isku-darka dijitaalka ah
Farsamada "Cajiinka" o collage Waxay bixisaa suurtagalnimada in la isku daro sawirro kala duwan si loo gaaro hal garaaf oo u gudbin kara farriimo fara badan adoo ku ciyaaraya taabashada fikradda ah aaladda ugu weyn. Farsamadan ayaa u muuqata inay leedahay mawduuc "cayriin iyo mid xasaasi ah", oo ah qaabka isdaba-marinta ee ugu isticmaalka badan dhammaan kuwa adeegsada, abuurista adduunyo male-awaal ah iyo xaqiiqooyin kale.
Marka hore marka laga hadlayo collage waxaa laga sameeyay dhanka aragtida jir ahaaneed maxaa yeelay waxay ku koobnayd la shaqaynta sawiro jireed xitaa adoo adeegsanaya asalka sababa luminta qalab sawir qaas ah (illaa iyo inta aysan jirin wax diidmo ah) imaatinka da'da dhijitaalka ah. collage isbeddelay iyo farsamadu waxay u suurtagashay inay leexleexiyaan oo u oggolaadaan farshaxan-yahannadu inay abuuraan shaqooyin iyagoon u baahnayn inay ku bixiyaan waxyaabo badan. Wixii loogu talagalay da'da dugsiga del collage imaatinka da'da dhijitaalka ah wuxuu macnaheedu noqon karaa dib-u-socod xagga hal-abuurka ah iyo nuxurka farsamada oo ay ugu wacan tahay maqnaanshaha taabashada shayga gacmihiisa. Maqnaanshaha qaybta la taaban karo waxay noqon kartaa faa'iido dhinac ah maadaama aanan mar dambe u baahnayn inaan heysano qoraallo dhan oo joornaalada iyo waxyaabo garaaf ah ah oo aan ku qaban karno collage, hadda waxaan kaliya u baahanahay inaan helno farshaxan farshaxan ah. Aaladda dijitaalka ah waxaan ku maareyneynaa inaan yareyno kharashka ku baxa qalabka iyo faa'iidooyinka kale laakiin sida wax waliba ay leeyihiin dhinac xun; isla sidaas ayaa ku dhacday imaatinka sawirka dhijitaalka ah.
Waxa muhiimka ah markaad la shaqeyneyso farsamadan waa qeybta hal abuurka, hal-abuurka Had iyo jeer way joogi doontaa wakhti kasta, ha ahaato hawl gacmeed ama shaqo dijitaal ah, hal-abuurnimadeena ayaa mas'uul ka noqon doonta sameynta maskaxdeena.
Collage uu sameeyay Alfredo Quintana (Instagram)
Sida loo sameeyo collage-ka Adobe Photoshop
Marka xigta waxaan baran doonnaa fikradaha aasaasiga ah ee ku shaqeynaya farsamadan iyadoo la adeegsanayo Photoshop.
Kahor intaanan shaqada u dhaqaaqin waxaa lagama maarmaan ah inaan sameyno waxyaabo taxane ah si aan nafteenna u dhiirrigelinno una abaabulno agabkeenna garaafka ah tan waxaa lagugula talinayaa inaad raacdo tilmaamahan:
Raadi tixraacyo garaaf ah (farshaxanno ku shaqeeya farsamada) Internetka waxaan ka helnaa ilo aan xadidneyn oo ah waxyaabaha garaafyada, shabakadaha bulshada, joornaalada, buugaagta ... iwm. Waa muhiim in la qoyo tixraacyo badan si loo abuuro dhiirrigelin muuqaal ah.
Raadi waxyaabo garaaf ah (iska ilaali xuquuqda daabacaadda) Waxaan ka heli karnaa tiro bangiyo muuqaal oo bilaash ah shabakadda. Qaar ka mid ah ilaha ugu caansan ee la yaqaan waa: Flickr, Pixabay, Google... iwm.
Abaabul alaabta oo samee sawirro. Abaabulka sawirrada iyo sameynta sawir horudhac ah ee fikradaha ayaa lagama maarmaan ah si loo gaaro natiijo wanaagsan.
Markaan intaas oo dhan diyaarsano ayaan ka shaqeyn karnaa Photoshop annagoo raacayna casharrada fiidiyowga ah ee aan uga tagnay khadadkaas kor ku xusan.
Heerka adag ee casharradan: aasaasiga ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Mashiinka loo yaqaan 'Cutpaste' (farsamada kolajka)
Waad ku mahadsan tahay, mid aad u cad oo aad u xiiso badan.